ယူနီကုဒ်ဆိုတာဘာလဲ ? ဘာကြောင့်သုံးသင့်တာလဲ? အပိုင်း-၃ | Pandaing Map
ယူနီကုဒ်ဆိုတာဘာလဲ ? ဘာကြောင့်သုံးသင့်တာလဲ? အပိုင်း-၃
ဇော်ဂျီကလည်း ယူနီကုဒ်လိုမျိုးပဲ စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သူ့စနစ်က မြန်မာနိုင်ငံက ပြည်သူတွေကို နှစ်ပေါင်းများစွာ အကျိုးပြုခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ နောက်ထပ် နည်းပညာအသစ်တွေလိုချင်ရင် ထောက်ပံ့ပေးဖို့ လိုအပ်တဲ့ အခြေခံအုတ်မြစ် ခိုင်ခိုင်မာမာ မပါရှိခဲ့ပါဘူး။
ဇော်ဂျီမှာကော အားနည်းချက်ဘာရှိလို့လဲ။ ဇော်ဂျီကလည်း ယူနီကုဒ်လိုမျိုးပဲ စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သူ့စနစ်က မြန်မာနိုင်ငံက ပြည်သူတွေကို နှစ်ပေါင်းများစွာ အကျိုးပြုခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ နောက်ထပ် နည်းပညာအသစ်တွေလိုချင်ရင် ထောက်ပံ့ပေးဖို့ လိုအပ်တဲ့ အခြေခံအုတ်မြစ် ခိုင်ခိုင်မာမာ မပါရှိခဲ့ပါဘူး။ သူ့ခေတ်သူ့အခါနဲ့ အဆင်ပြေခဲ့ပေမယ့်လာမယ့် ၅နှစ် ၁၀ နှစ် အနှစ် ၂၀ မှာ ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေနိုင်တော့ပါဘူး။ ဇော်ဂျီနဲ့ စာရိုက်တဲ့အခါ ရိုက်တဲ့သူပေါ်မူတည်ပြီး အသုံးပြုတဲ့ ကီးတွေ ကွဲပြားလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း စာတစ်ပုဒ် သိမ်းသွားရင် သူ့ဆီမှာ အမြင်မှာတူပေမယ့် ကုတ်နံပတ်မတူတဲ့ အက္ခရာတွေ အများကြီးပါသွားပါတယ်။ ဒါတွေဟာ လူလို မျက်လုံးနဲ့မဖတ်တတ်တဲ့ကွန်ပျူတာအတွက်တော့ အိမ်မက်ဆိုးလိုပါပဲ၊ သူဘယ်လိုမှ နားမလည်နိုင်ပါဘူး။ သူနားမလည်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့က ကွန်ပျူတာကို အမိန့်ပေးခိုင်းစေလို့မရတော့ပါဘူး။ အလားတူပြဿနာက ရှာဖွေတဲ့အခါမှာလည်း ဒုက္ခပေးပါတယ်။
စာရိုက်တဲ့အခါ စာလုံးပေါင်းစစ်လို့မဖြစ်နိုင်တာ၊ စာကြောင်းတွေ ခွဲရအဆင်မပြေတာ၊ ဒီဖောင့်တစ်မျိုးတည်းကိုပဲ နေရာတကာမှာ သုံးရလို့ ဒီဇိုင်းပိုင်းအရ ဆန်းသစ်တီထွင်လို့မရပဲ မျက်လုံးပသာဒမဖြစ်တာ။ ဖုန်းထဲမှာ သူရှိနေရင် ယူနီကုဒ် service တွေသုံးမရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ Translate ကို ကောင်းကောင်းသုံးမရဘူး၊ မြေပုံတွေသုံးမရဘူး၊ TED talk, khan academy သုံးမရဘူး။ မြန်မာဘာသာနဲ့ မီနူးတွေ ဆက်တင်တွေသုံးမရဘူး။ အချို့သော မြန်မာ ဆော့ဖ်ဝဲတွေသုံးရင် ဖောင့်မမှန်ဘူး
နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ တိုင်းရင်းသားစာလုံးတွေရိုက်လို့မရပါဘူး။ ဇော်ဂျီကနေ ယူနီကုဒ် ပြောင်းရင်ဘာလုပ်ဖို့လိုသလဲ ။ ဇော်ဂျီဖောင့်မထည့်ခဲ့ဖူးဘူး ဆိုရင်တော့ ဘာမှလုပ်စရာမလိုပါဘူး ၊ တန်းပြီး လက်တင်သုံးရုံသာရှိပါတယ်။ ကီးဘုတ်ကတော့ အဓိက နှစ်မျိုးသာရှိပါတယ်။ မြန်စံကီးဘုတ် နဲ့ ဇော်ဂျီလက်ကွက်သုံးကီးဘုတ်ပါ။ အကြံပေးလိုတာကတော့ မြန်စံကီးဘုတ်ကိုသာ စတင် လေ့ကျင့်သင့်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ချိန် ၂နာရီခန့်သာပေးလိုက်ရင် ကောင်းကောင်းနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရိုက်တတ်သွားနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့မှ အဲဒီလိုမဟုတ်ဘူး ယခင် က ဇော်ဂျီလက်ကွက်နဲ့အသားကျနေခဲ့လို့ ဇော်ဂျီလက်ကွက်အတိုင်းပဲ ယူနီကုဒ် ရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း အဲဒီလို ရိုက်လို့ရအောင်ဖန်တီးပေးထားတဲ့ ကီးဘုတ်တွေရှိပါတယ်.။ Keymagic တို့လိုမျိုး ၊ အဲဒါတွေသုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကတော့ window, mac ကွန်ပျူတာတွေအတွက်ပါ။
ဖုန်းတွေမှာဆိုရင်တော့ အဓိက Android နဲ့ iOS ရှိပါတယ်။ Android ထဲမှာကိုပဲ Brand ခွဲတွေက အများကြီးရှိတော့ ပြောရတာတော့နည်းနည်းခက်ပါတယ်။ အချို့စက်တွေက ဖုန်းထဲမှာပဲ theme ကနေ ပြောင်းတာမျိုး၊ Language setting ကနေ ယူနီကုဒ်ပြောင်းလို့ရတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ အချို့ဖုန်းတွေမှာတော့ အဲဒီsetting မပါလို့ Font changer တွေ ဒါမှမဟုတ်ရင် မူလ firmware ပြန်တင်ရတာမျိုးတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ios မှာတော့ ပိုရှင်းပါတယ်။ လက်ရှိ ios မှာ တော့ My font နဲ့ ttkeyboard ထဲမှာပါတဲ့ Pyidaungsu နဲ့ uni zg ကီးဘုတ် ဆိုတာကို ထည့်လိုက်ရင် ချက်ချင်း ယူနီကုဒ် သုံးနိုင်ပါတယ်။ လာမယ့် ios ဗားရှင်းအသစ်မှာတော့ ယူနီကုဒ်ဖောင့်နဲ့ ကီးဘုတ်တို့ဟာ စက်ထဲမှာ တစ်ပါတည်း ပါလာတော့မယ်လို့ ပြောပါတယ်။
အချို့ကတော့ ယူနီကုဒ်မသုံးချင်တာ လက်ကွက် ကြောင့်လို့ပြောပါတယ်။ တကယ်ကတော လက်ရှိ အများစုသုံးကြတဲ့ tt keyboard, bagan, frozen , Samsung စတဲ့ ကီးဘုတ်တွေအားလုံးမှာ ယူနီကုဒ်ကော ဇော်ဂျီကော လက်ကွက်တူတူပါပဲ။
ဒါပေမယ့် စက်ရဲ့ဖောင့်က ဇော်ဂျီဖြစ်နေပြီး ယူနီကုဒ် လက်ကွက် ကို ဖွင့်သုံးရင်တော့ စနစ်မတူတဲ့အတွက် ဘယ်လိုမှ မှန်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီယူနီကုဒ် လက်ကွက်တွေ အလုပ်လုပ်စေချင်ရင် ၊မှန်စေချင်ရင် စက်ရဲ့ ဖောင့်ကပါ ယူနီကုဒ် ဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်။
ကိုယ့်ဘာသာ ပြောင်းတတ်ရင်ပြောင်းပါ။ မပြောင်းတတ်ရင် နီးစပ်ရာ ကျွမ်းကျင်သူတွေကို အကူအညီတောင်းပါ။ အဲဒါမှမ ရရင် ဖုန်းဆိုင် ကွန်ပျူတာဆိုင်တွေဆီကို သွားပြီး ယူနီကုဒ် ပြန်ထည့်ခိုင်းလိုက်ပါ။ သူတို့တွေ ဇော်ဂျီထည့်ပေးခဲ့သလို အခု ယူနီကုဒ်လည်း ပြန်ထည့်ပေးနိုင်ကြပါတယ်။ နောက်ဆုံးပြောရရင် ဘာကြောင့် ယူနီကုဒ် ပြောင်းသင့်တာလဲ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ ပြဿနာပေါင်းသောင်းခြောက်ထောင် ရှိပါတယ်။ တကယ်က အဲဒီထက်တောင်ပိုချင်ပိုဦးမှာပါ ။ သေးသေးမွှားမွှား အရေးမပါဘူးလို့ထင်ရပေမယ့် အင်တာနက်သုံးတဲ့သူ သန်း ၂၀ ကျော်လောက်မှာ ဖောင့်ပြဿနာ မတက်ဖူးတဲ့သူမရှိပါဘူး။ အဲဒီ သန်းနဲ့ချီတဲ့ ပြည်သူတွေ ဖတ်ဖို့ စာ၊ သုံးဖို့ app တွေ ဖန်တီးသူတွေမှာလည်း ဒီစနစ်နှစ်ခုအကြားမှာ ဗျာများ နေရပါတယ်။ သူတို့ သာ ဒီ အတွက် ပူစရာမလိုတော့ဘူးဆိုရင် ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ app တွေ၊ service တွေ ထုတ်လုပ် ဖန်တီးနိုင်ကြပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဇော်ဂျီကိုပဲ စံစနစ်အဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်လို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ မဖြစ်နိုင်တဲ့အချက်ပေါင်းများစွာ ရှင်းပြလို့ရပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆရင်တောင်မှ သူ့ကို စံအဖြစ်သတ်မှတ်ဖို့ ကုန်ကျမယ့်ငွေကြေး၊ ကြာမြင့်မယ့်အချိန်၊လူအရင်းအမြစ် စသဖြင့်ပေါ့။ ဒါတွေကို ကျွန်တော်တို့ မတတ်နိင်ပါဘူး၊ ဒါကြောင့်မို့ ဇော်ဂျီနဲ့ ယူနီကုဒ်နှစ်ခုမှာ တစ်ခုပဲ ရှိဖို့လိုကိုလိုပါတယ်။ နှစ်ခုလုံး ရှိခြင်းဟာ ဘယ်မောင်းနဲ့ ညာမောင်းစနစ်နှစ်ခုစလုံးကို တစ်ပြိုင်တည်းကျင့်သုံးသလို ဒုက္ခများပါတယ်။ အလုပ်မတွင်ပါဘူး။ လက်ရှိမှာ နှစ်မျိုးလုံးမြင်နေရတဲ့ နည်းပညာတွေကို အသုံးပြုထားပေးကြတယ်လို့ဆိုပေမယ့် အဲဒီနည်းပညာများဟာ ရေရှည်အတွက်မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ဆီမှာလည်း အားနည်းချက်တွေရှိပါတယ်။ အဲဒီအားနည်းချက်တွေကို ပြင်မယ့်အစား ၊အကုန်လုံးယူနီကုဒ် ဖြစ်သွားတာက ပိုပြီး အကျိုးများပါတယ်။ ယာယီအပြောင်းအလဲကာလအတွက်ကို သာရည်ရွယ်တာဖြစ်လို့ အချိန်တစ်ခုရောက်ရင်တော့ ဒီ အလိုအလျောက် ပြောင်းလဲပေးတဲ့ service တွေက ရပ်တန့်သွားနိုင်ပါတယ်။ ယူနီကုဒ်က စာရိုက်ရပိုလွယ်တယ်။ အမှားပိုနည်းတယ်။ ယူနီကုဒ် အနွယ်ဝင် ဖောင့်တွေကိုသာအသုံးပြုရင် မည်သည့်နေရာမှာမဆိုမြင်ရတယ်။ ပြီးတော့ လက်ရှိ ကွန်ပျူတာ ၊ဖုန်း အားလုံးဟာ ယူနီကုဒ် အနွယ်ဝင် ဖောင့်ကိုသာသုံးကြတယ်။
မိုဘိုင်း အော်ပေရတာတွေ၊ မီဒီယာတွေ၊ social influencer တွေ၊ mobile app တွေဟာ ယူနီကုဒ်တစ်မျိုးတည်းကို သာ သုံးတော့မှာဖြစ်လို့ ဇော်ဂျီဆက်သုံးနေရင် သူတို့စာကို ဖတ်လို့မရနိုင်တော့ပါဘူး။
ပြီးတော့ လက်ရှိအချိန်ဟာ အစိုးရကိုယ်တိုင်တွန်းအားပေးတာကော အပြောင်းအလဲအတွက် ကူညီမယ့်သူများ ရှိနေတာကောဖြစ်လို့ ပြောင်းဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Latest PostsRecent Articles & Tips
ကိုယ်ပိုင်စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်မှုအတွက် အကောင်းဆုံးသော လမ်းညွှန်မှု (၁၀) ခု9Oct | 2019
ယူနီကုဒ်ဆိုတာဘာလဲ ? ဘာကြောင့်သုံးသင့်တာလဲ? အပိုင်း-၃ 24 Sep | 2019
ယူနီကုဒ်ဆိုတာဘာလဲ ? ဘာကြောင့်သုံးသင့်တာလဲ? အပိုင်း-၂ 20 Sep | 2019